Ahoana no fomba ahazoana hoditra miaraka amin'ny GIMP na Photoshop? | Famoronana an-tserasera
Matetika ny olona dia manao vakansy mandritra ny volana aogositra, mankafy fitsangatsanganana any ambanivohitra, mankany amin'ny dobo filomanosana, mahita toerana vaovao na angamba milentika amoron-dranomasina fotsiny. Fa raha ianao dia anisan'ireo olona izay, amin'ny antsasaky ny fahavaratra, dia mandany ny fotoanany eo alohan'ny solosaina, na ho an'ny asa tapa-potoana, na adidy na te-hanao izany fotsiny na manao ahoana na manao ahoana ny raharaha, matetika dia lasa sarotra be ny te hilentika mba hanehoana tan tsara tarehy amin'ity volana amin'ny taona ity.
Soa ihany ho an'ny maro, fitaovana famolavolana sary Izy ireo dia afaka manampy antsika hamaha ity olana madinidinika ity raha tsy manana fotoana ahafahana mandao ny efijery amin'ny solosaina ary ny sary tianao indrindra ihany no ilainao ary amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao ny fomba mandehana volontany noho ny GIMP na Photoshop Ary na dia eo aza ny fiatraikany tsotra izao ampiharina amin'ny sary fa tsy amin'ny tena fiainana, farafaharatsiny mba hanana fotoana hizara izany amin'ny olom-pantatrao sy ny namanao amin'ny tambajotra sosialy izay nofidinao ianao.
1 Ahoana ny fomba hahazoana tan tsara amin'ny Photoshop?
2 Ahoana no hamafana amin'ny GIMP?
Ahoana ny fomba hahazoana tan tsara amin'ny Photoshop?
Raha te hanana an'io hoditra hoditra volontany tsara tarehy io isika amin'ny Photoshop, tsotra be ny manao azy, na dia mety ho somary mandreraka aza.
Ny zavatra voalohany ilainay dia ny sarin'ny tenantsika, na eny amoron-dranomasina na ao amin'ny pisinina ary mifidy ny rehetra isika faritra izay ampahany amin'ny hoditra. Mba hanaovana izany dia afaka mampiasa fomba maro toy ny lasso andriamby isika, ny lasso polygonal na amin'ny fahasamihafana misy azy amin'ny fampiasana ny maody maska ​​haingana.
Mba hahafahana misafidy dia tsindrio ny bokotra Q ary hosodoko ny faritra iray manontolo izay maneho ny hoditra amin'ny borosy. Efa nanao an'ity, izay rehetra nolaloranay dia homarihina amin'ny loko mena. Aorian'io dia tsindrio indray ny lakilen'ny Q hahafahana miverina amin'ny maody mahazatra, mandeha any amin'ny safidin'ny safidio isika ary tsindrio ny mivadika.
Ankehitriny rehefa nifidy ny hoditra isika, dia mila manokana ny tenantsika hanitsy ny masontsivana roa, ny tena lehibe dia ny haavon'ny sary ary amin'ny faharoa dia manana isika famirapiratana sy fifanoherana Amin'io. Voalohany dia mandeha any amin'ny sehatr'asa izahay ary tsindrio ny ambaratonga na afaka manery Ctrl + L. Ny haavon'ny tokony hofidintsika dia miankina amin'ny sary nofidintsika, ny lokon'ny hoditra tany am-boalohany ary ny haavon'ny tan izay tiantsika apetraka aminy.
Mba hanaovana an'io dia manandrana fotsiny ireo fikirana izahay mandra-pahatongantsika ilay feo manjavozavo tianay indrindra.
Eny ary, efa manana ny feontsika tadiavina isika saingy somary miala kely, toa izao mila manohy ny masontsivana faharoa isika izay ny famirapiratana sy ny fifanoherana, izay ataontsika ihany koa avy amin'ny menio fanovana. Toy izany koa no ampiharantsika ny fanitsiana mandra-pahatongantsika ny valiny tadiavintsika.
Ary farany, tsy maintsy esorintsika ny safidin'ny hoditra, avy amin'ny menio fisafidianana na amin'ny fanindriana fotsiny Ctrl + D.
Ahoana no hamafana amin'ny GIMP?
Mba hahazoana tan tsara tarehy amin'ny alàlan'ny fitaovana GIMP, dia mitovy tanteraka ny fomba tokony harahintsika, miaraka amin'ny tsy fitovizany ny menus sasany dia mety miovaova. Raha vantany vao nisafidy ny faritra manontolo izay mifanentana amin'ny hoditry ny sary isika, dia mankany amin'ny varavarankely misy ny haavony, avy amin'ny menio miloko, manindry ny ambaratonga isika ary manamboatra ny soatoavina mandra-pahatongantsika ny valiny tianay ny indrindra.
Toy izany koa no nataontsika tamin'ny Photoshop, tsy maintsy manao izany isika izao amboary ny famirapiratana sy ny tsy fitoviana, mba tsy ho maizina ny hoditra. Amin'ity indray mitoraka ity dia mandeha amin'ny menio loko izahay. Aorian'ny fanaovana an'io dia ny hany sisa tavela hatao dia ny famafana ny faritra hoditra ary azontsika ilay tan izay tadiavintsika fatratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana no fomba ahazoana hoditra miaraka amin'ny GIMP na Photoshop?